မဲမပေးရင် ဖမ်းနိုင်သလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မဲမပေးရင် ဖမ်းနိုင်သလား။
Posted by Good Idea on Nov 3, 2010 in Creative Writing, Opinions & Discussion | 19 comments
အခုတလောမှာ ကျနော့်ကို အမေးအများဆုံး မေးခွန်းကတော့ မဲမပေးရင် ဖမ်းနိုင်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ မိတ်ဆွေတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီတွေ၊ ညီမတွေ တော်တော်များများ မေးကြပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ထိတွေ့နေသူဖြစ်တော့ သူတို့မေးတာကို ကိုယ်သိသလောက် ပြန်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲ မန္တလေးဂေဇက်က ဘော်ဒါတွေလည်း မသိသေးသူရှိရင် သိရအောင် ပို့စ်ကလေးတင်လိုက်ဦးမှလို့ စိတ်ကူးမိတာနဲ့ ဒီပို့စ်ကလေး ရေးလိုက်ပါတယ်။
မဲပေးချင်လည်း ရပါတယ်။ သို့သော် ပါတီတွေအကြောင်း မသိလို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကို နားမလည်လို့၊ ကိုယ့်မြို့နယ်မှာ ၀င်အရွေးခံတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ဘယ်သူမှန်း မသိဖြစ်နေခဲ့ရင် မဲမပေးဘဲ နေလို့ရပါတယ်။ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ မဲပေးရမယ့် လူမရှိဖြစ်နေရင်တော့ မဲမပေးသင့်ပါဘူး။ မဲမပေးရင် လုံးဝ မဖမ်းနိုင်ပါ။
ရဲ၊ ရယက၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးစသဖြင့် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ပါစေ။ အာဏာ ငွေကြေး တခုခုနဲ့ မဲပေးအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးရင်၊ အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးရင် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ကျပါတယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း ၁ အပိုဒ် ၂ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) မှာ ဖော်ပြထားတာက ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သော အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် မဲပေးခြင်း မပြုဘဲ နေနိုင်သော အခွင့်အရေး ဖြစ်သည် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ မြန်မာပြည်သူတိုင်း မဲပေးချင်ရင် ပေး၊ မပေးချင်ရင် မပေးပါနဲ့။ ကျနော်ကတော့ ပေးပါလို့လည်း မပြောဘူး။ မပေးပါနဲ့လို့လည်း မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားကြပါ။
မဲပေးမယ်ဆိုရင် တခုစဉ်းစားဖို့ ပြောချင်တာကတော့ စစ်အစိုးရဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ပြည်သူကို အလေးထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အကျိုးအတွက် လိုမှသာ ပြည်သူကို သုံးတာပါ။ ဥပမာတခု ပြရရင် ဘာထောက်ခံပွဲ၊ ညာထောက်ခံပွဲဆိုရင် တအိမ်တယောက် မလာမနေရ။ မလာရင် ဒဏ်ငွေဘယ်လောက်ဆိုပြီး အတင်းခေါ်တာပါ။ မင်းတို့ လိုက်ချင်သလား။ လိုက်ချင်တဲ့လူ လိုက်ခဲ့ပါ။ မလိုက်ချင်လည်း မင်းတို့ဆန္ဒကို ငါတို့ လေးစားတဲ့အနေနဲ့ အတင်း မခေါ်ပါဘူးလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဖူးပါ။
ထိုနည်းတူစွာပဲ ရေမြောင်းဖော်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်။ မဖော်ရင် ဒဏ်ငွေရိုက်၊ ခြံစည်းရိုး ထုံးသုတ်ဖို့လည်း မလုပ်မနေရ။ အမိန့်နဲ့ပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒဆိုတာကို ဘယ်တုန်းကများ အလေးထားဖူးပါသလဲ။
အခု သတင်းစာထဲကနေ ပြည်သူတွေ လွပ်လပ်စွာ ဘယ်လိုမဲပေးနိုင်တယ်။ မဲပေးကြစို့ ဘာညာလို့ တိုက်တွန်းနေတာက အကြောင်း ရှိပါတယ်။ မဲပေးလို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲ အတည်ဖြစ်သွားရင် သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြိးကို အတည်ပြုနိုင်သွားပါပြီ။ ဒါဆိုရင် သူတို့က ဒီဥပဒေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက် ဗိုလ်ကျ အုပ်ချုပ်ပါတော့မယ်။
ကျနော်ကတော့ ရှင်းရှင်းပါပဲ။ ဘယ်ပါတီကိုမှ မဲမပေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတာကို သဘောမတူလို့ပါ။ ဘာလို့ သဘောမတူသလဲဆိုတော့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းက ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီတုန်းက ပြည်သူတွေက ကျနော် ကျမတို့ကို အုပ်ချုပ်ပါလို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ရှိနေပါပြီ။ ဘာကိစ္စနဲ့မှ နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်စရာ အကြောင်း မရှိပါ။
စစ်တပ်က လုပ်ရမှာသည် အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အာဏာတွေ လွှဲပြောင်းပေးပြီး သူရဲ့ မူလတာဝန်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကိုပဲ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၉၀ ခုနှစ်ကတည်း အဲဒီလို လုပ်ခဲ့ရင် အခုလောက်ဆို ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ အတော်လေးကို တိုးတက်နေပါပြီ။ အခုတော့ ၉၀ ခုနှစ် အနိုင်ရပါတီတွေကို ဖျက်သိမ်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်တခုကျင်းပတာကိုက လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်မို့လို့
ရှေ့မှာ ဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါ။ ကျနော့်အတွက်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မနှစ်သက်ကြောင်း ကျနော်ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးအရ မဲမပေးဘဲ သဘောမတူ၊ ဘ၀င်မကျကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတရားတဲ့ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ အကြိမ်ပေါင်း ထောင်သောင်း ကျင်းပပါစေ။ ကျနော် ဘယ်တော့မှ မဲပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ အုပ်ချုပ်မယ့် ဥပဒေကိုက မကောင်းဖြစ်နေရင် ဘယ်ပါတီ၊ ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပဲ ဖြစ်နေပါစေ ပြည်သူအကျိုးကို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော် ယုံကြည်နေလို့ပါ။ လူကောင်းပြီး မူမကောင်းရင် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တာ ဘာများထူးနိုင်မတုန်း။
အခု ၂၀၀၈ ဥပဒေမှာက စစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်တွေက ဥပဒေပြု အုပ်ချုပ်မယ့် ပါလီမန်ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း နေရာကို အလကား သောက်ရှက်မရှိ အချောင်နေရာဝင်ယူထား၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကလည်း ကျန်တဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ၀င်လုနေတော့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်တက်မယ့်အစိုးရကို အခုကတည်းက ပုံဖော်ကြည့်ကြပါ။ ပြည်သူ့အတွက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုနေတဲ့လူတွေ ဘယ်အပေါက်က လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ကြပါ့မလဲ။
ပြည်သူ့အကျိုးကို တကယ်လုပ်ချင်သူတွေကိုရော လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ခွင့်ပေးပါ့မလား။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာကို ဘာမဆို ဖြစ်အောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကလည်း သူတို့ လက်အောက်က ဖြစ်နေတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ခေါင်းတချက်ခါလိုက်ရင် ပြီးသွားပါပြီ။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဘယ်ကို တိုင်ချင်သလဲ။ တိုင်ချင်ရာကိုသာ တိုင်။ အစိုးရက အရေးလုပ် ဂရုစိုက်မည် ထင်ပါသလား။
အဲတော့ ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲမပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ ကျနော့်အလွန်တော့ မဟုတ်ဘူး လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိပါတယ်။ တချိန်ချိန်မှာ လွပ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါကျရင်တော့ မဲရုံကို ကျနော်ရှေ့ဆုံးက ပြေးပြီး မဲပေးပါ့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မယ့် ဥပဒေနဲ့ လူပုဂ္ဂိလ်ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် လွပ်လွပ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ခွင့်ရနေမှတော့ ဘာကြောင့် ရှေ့ဆုံးကပြေးပြီး မဲမပေးဘဲ နေရမှာတုန်းဗျ။ မဟုတ်ဘူးလား။
၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကိုသဘောမတူ။ အဲဒါကိုအသက်သွင်းတဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်တယ်လည်း ပြောတယ်..။ အဲဒီဥပဒေပြုသူဆိုသူတွေကလှမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့ လူတယောက်ကနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာကြီးလုပ်..။ အဲဒီကနေ သူ့သဘောနဲ့သူထုတ်တဲ့ ဥပဒေဆိုတဲ့.. အမိန့်(ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ)ဆိုတာလေးကျတော့ အားကြိုးမာန်တက် ဘောင်ဝင်အောင်လိုက်နာဖို့ လုပ်နေတယ်..။
အင်း..အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ …။
kai ….(တောထွက်တော့မှနဲ့တူတယ်..။) ဆိုတာ တောခို တော့မှာလား?.ဒီအချိန်မှာ စုပေါင်းသပိတ်မှောက် လှိက်ရအောင်..
အားလုံးလူညီပြီးမဲမပေးပြန်ရင်လည်း သူတို့လူနဲ့သူတို့လက်ဝါးခြင်းရိုက်ပြီး ကန့်ကွက်မဲမရှိ အပြတ်သတ်အနိုင်ရသွားပါတယ်ဘာညာလုပ်နေဦးမှာ။ ဒီမနက်ပြောနေကြတဲ့သတင်းကတော့ မဲရေတွက်ခါနီးကို အားလုံးဝိုင်းကြည့်ပါလို့လည်း ပြောတယ် မမှန်ရင်တော့ ခဲနဲ့သာထုတော့တဲ့… ။
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတပါးက ပြောဖူးတာက ရှေ့မှာလည်းချောက် နောက်မှာလည်းရန်သူ့လှံဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရပ်နေပါတဲ့။ အခုလည်း မဲပေးလည်းသူတို့နိုင်မယ်၊ ပြည်သူအပေါင်းက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာကို ထောက်ခံတယ်လို့ဆိုမယ်၊ မဲမပေးလည်းသူတို့မှာ မဲပြားအပိုတွေရှိပြီးသား၊ ပယ်မဲလုပ်လဲ အသစ်ပြန်ဖြည့်ထည့်မှာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြင့် အသံတိတ်ဆန္ဒပြကြပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မဲရုံတွေမှာခြောက်ကပ်တာတောင် သူတို့က အဓိပ္ပါယ်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့ နိုင်တာကို ကမ္ဘာကိုပြနိုင်ပါတယ်။
ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ ….. အဲဒါထက် ကြံ့ဖွံ့တွေ အနိုင်ရသွားရင်ကော နောက်တက်မဲ့ အစိုးရက အေးအေးဆေးဆေး ရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား ခင်ဗျာ ….
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး မရှိပဲနဲ့တော့ သေနတ်ထောက် အုပ်ချုပ်တာ တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေထဲက မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် တစ်ခုတည်းကိုတောင် ပေးရဲပါ့မလား ….
နောက် နိုင်ငံခြားအစိုးရ အများစုက သူတို့ပဲနိုင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှကို လက်မခံဘူးလို့ပြောနေကြပါပြီ။
ရှင်းနေတာက လူထုက သူတို့ကို မကြိုက်လို့ ( ကြိုက်ချင်စရာ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိပဲ ကိုယ်ကြိုးရှာနေတာကလည်း ရှင်းနေတော့ ) မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာရှိနေတာပါ။
သူတို့နိုင်ပါတယ်လုပ်ရင် ပြဿနာတွေပိုပြီးကြီးလာမယ် လို့ သံတမန်အသိုင်အဝိုင်းက သုံးသပ်နေပါတယ်။
ခေါ်ပြောပါတယ် .. မှတ်ပုံတင်မရှိလို့မဲမပေးပဲနေမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ချိန်ပြ
သာနာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ် ပြောကြပါအုံး။
မဲပေး၊ မပေး ကိစ္စက ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ မဲဆန္ဒရှင်များနဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။
jemmy fox says:
မဲပေးမယ်လို့ စဉ်းစားရင် ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ် ကိုကြည့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှ မဲပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ အတိတ်မှာကော အခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်မှာပါ နိုင်ငံတော်က ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကို ထိုက်သင့်သလောက်တောင် ပံ့ပိုးမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို လူတိုင်းအသိပါ။ လူထုက မဲပေးခဲ့ရင် ပေးတဲ့မဲအရေအတွက်ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အတွက် ထောက်ခံမဲဖြစ်အောင် လုပ်မှာ အသေအချာပါ။ အနာဂတ်မှာလည်း သူတို့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သေချာအကွက်ချစီမံပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်နေတာပါ။ ဒါတွေကို လူတိုင်းလိုလို သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ မဲမပေးပဲနေတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆူး အတွေးကတော့.. ကလေးဆန်နေမလားတော့ မသိဘူး..
ကောက်ညှင်း တပြည်ကို ဆန့် တို့ဆီဘူး တဘူး ရောတယ် ဆိုရင်.. ကောက်ညှင်းသတ်သတ်လိုချင်ရင်တော့.. နို့ဆီဘူး တဘူးစာ ဖယ်ထုတ်ရမယ်.. နို့ဆီဘူး တဘူး ဖယ်လိုက်ရင်တော့… ၈လုံး တပြည်က နေ ၇လုံးဖြစ်သွားမှာဘဲ.. ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. နိုင်မှာ သေချာသော်လည်း.. သူကို အားမပေးတဲ့ မဲ တပြားဘဲ လုပ်ချင်တယ်။
ဟေ့ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော တို့ကတော့ မီးမှန်မှန်ပေးဖို့ ရယ်၊ ရေမှန်မှန်ပေးဖို့ရယ် အဲဒီလူပဲ မဲပေးမယ် …ငှဲ..ငှဲ..
မင်းကွာ အတ္တကြီးလိုက်တာ ပထွေးကို အဖေတော်ချင်နေတာလား ….. ကလေးလောက်တောင်မတွေးတတ်ပါလားဟ။
မင်းတို့ကို မက်လုံးပေးပြီး မီးလေးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှန်မှန်ပေးတာများ အဟုတ်ကြီးမှတ်နေလား ။ မင်း ပထွေးတွေက အပိုင်ရပြီးရင် အကုန်ရောင်းစားမှာကွ ။
အီးမှန် ရေမှန်(ဆီး) ချင်ရင်တော့… ဆရာဝန်ဆီမှာ ဆေးသွား တောင်းမှဘဲရမယ်..
မပေးပဲ နေလို့ရတယ်ဟုတ်… အလုပ်ရှုပ်တာ တစ်ခုတော့ သက်သာသွားပြီပေါ့…
ရွေး+ကောက်+ပွဲ= ပြည်သူလူထုက ရွေး တယ်။ လူထုကြိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ကောက် တင်လိုက်တဲ့ပွဲပါဘဲ။ ရှင်းပါတယ်။
ရွေးဆိုတဲ့ဝိသေသမှာ ပြည်သူလူထုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ုရွေးပိုင်ခွင့်၊စိတ်ကြိုက်မဲမပေးဘဲဥပက္ခာပြုပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့အခြေခံ အခွင့်အရေးအားလုံးပါဝင်တယ်။
ကောက်တင် လိုက်တဲ့ပွဲကလဲ ပြင်ပပယောဂကင်းရှင်းပြီးနှောက်ရှက်ချိမ်းချောက်မှု မျာဲး့လဲ မရှိစေရဘူး။
နှောက်ရှက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ လက်နက်များနဲ့ချိန်ရွယ်မှု၊ပြစ်မှု၊မဲမပေးမှုနဲ့ဖမ်းမှု၊ခြိမ်းခြောက်ပြီးမဲအတင်းထဲ့ခိုင်းမှု အစရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပျက်စေမဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမရှိအောင်လူတိုင်းကမျက်လုံးပေါင်းများစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်။ အာဏာရှင်ကလဲသူ့ပွဲပျက်မှာကြောက်တော့သူ့စိတ်သူထိန်းရတဲ့နေ့ဘဲ။
ဒီနေ့ဟာ သန်းရွှေအခက်၊ ဗမာ့အချက်လို့ဆိုရအောင်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကိုလက်လွှတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ ဒီရက်မှာလွတ်လပ်ရေးလမ်းစပွင့်သွားအောင်၊ သန်းရွှေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတုပျက်အောင်လုပ်တာနဲ့စကြမယ်။ ဗမာ့ထွက်ရပ်လမ်းလို့သမိုင်းတွင်စေမဲ့ တမျိုးသားလုံး ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတက်ညီလက်ညီသပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြပါစို့။
မဲကတော့နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ညစ်နေပြီဗျို့…….. ကြိုတင်ကြီးနဲ့ကိုင်ပေါက်နေတာ…ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ…..